Sphero Mini, iyo tekinoroji yakamanikidzwa kusvika pakakwirira | IPhone nhau
Sphero akazozivikanwa nesiwe mukuru BB-8 droid yakanyatsoburitsa mafambiro ese eanozivikanwa Star Wars robhoti. Pamberi robhoti iro, rakanga ratotanga Sphero yekutanga, nzvimbo iri kure-inodzorwa, uye ikozvino ichangobva kuwedzera mhuri ne droids nyowani kubva kuStar Wars saga, sezvatambotaura ichi chinyorwa.
Asi haasi iye chete anoda kuti adanane nematoyi anodhura aya, nekuti neSphero Mini yake anoda kuti marobhoti ake akanaka ave mukati memunhu wese. Kumirira kwenguva pfupi kwaunowana kwese tekinoroji yekambani yakamanikidzwa, uye kuti pamwe nekambani yekushandisa ye iPhone yako unogona kunakidzwa nenguva. Takamboiyedza uye tinokuratidza zvese zvainogona kuita mumifananidzo nemavhidhiyo.
2 Kudzora, kutamba uye chirongwa
3 Kuzvidzivirira kunogumira pamaminetsi makumi mana nemashanu
Sphero Mini idiki epurasitiki nzvimbo inoyeuchidza kwazvo zvemukati memazai anoshamisika. Kuvhura semazai ane mukurumbira isu tichawana mukati memwoyo weiyo diki robhoti ine chitarisiko uye saizi iri kunyengera. Maseru, mota uye ma LED anoumba iyi toy yevana nevakuru muhukuru hunokutendera kuti uutakure muhomwe yako pasina iwe kuona.
Muchikamu chemukati tichawana iyo microUSB yekuchaja chinongedzo. Tekinoroji yakapoterera nharaunda iyi yakapusa. uremu hunorema hunochengeta chidimbu chemukati chakamira apo mavhiri anoita kuti bhora rekunze riumburuke uye iyo Sphero Mini inofamba ichitevera mirairo yedu, iyo yatinoita nekutenda kune Sphero Mini application yatinogona kurodha pasi kubva kuApp Store (linkMwenje ye LED mukati ine basa rekupa hukuru hwekuona kuona kune kufamba kweshiri diki.
Kudzora, kutamba uye chirongwa
Chii chaungaite netoyi toyi iyi? Zvakanaka, zvinhu zvakawanda, kupfuura zvaungafungidzira. Izvo zviri pachena: ita kuti irambe ichimhanya kupfuura inodhura kumhanya pasi peimba yako kana patio ichidzora kuburikidza neako smartphone. Kana iwe uine mhuka kumba, iwe uchave nekunakidzwa kwakawanda uchiona imbwa yako kana katsi ichichidzingirira chakatenderedza kamuri. Mhinduro yeSphero Mini inokurumidza kwazvo, uye sekutaura kwedu ine inopfuura yakaringana kumhanya kuita kuti chipfuwo chako chizadzike kwechinguva.. Iyo yakajairika kutonga kweSphero nenzira yeiyo chaiyo joystick pachiratidziro inopfuura chaiyo kuibata pasina matambudziko uye huwandu hwayo hunosvika kumamirioni gumi hwakatokwana.
Asi isu zvakare tine dzimwe nzira dzekutonga dzakakwana pakutamba nemidziyo iyo Sphero Mini inotitorera: bowling pini nemakoni. Chipfuramabwe, kudzora nekuregedza chishandiso uye kutonga nemaoko echiso zvinoshanda kuwedzera mikana yekutamba. Ini pachangu, ini ndinosarudza yakajairika joystick uye chipfuramabwe che bowling, asi mamwe maviri maitirwo anoda kuziva. Pamusoro pekudzora bhora tinokwanisa kurishandisa sechidziro chekukwikwidza pamitambo inounzwa neApple app. Iyo Sphero Mini inozove inodzora yetipiripiti mune yakasarudzika martian mhondi, kana mutongi wemutambo wemujaho kana chaicho «zvidhinha».
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, tinogona kushandisa Sphero kutanga munyika yehurongwa. Iyo Sphero Edu app (iTunes) zvinokutendera nyore nyore kugadzira mapurogiramu nekubatanidza akasiyana mabara ekuraira. Nekudhonza uye kubvarura mabara ekuraira akasiyana sekunge zvidimbu zvepuzzle, iwe unozogadzira chirongwa icho chako Sphero Mini ichaburitsa zvine hungwaru. Kufambisa, shanduko yemuvara ... pane zvakawanda sarudzo iwe dzaunogona kushandisa. Kune zvekare zviitwa zvaunogona kutora chikamu mukati meSphero mushandisi nharaunda.
Kuzvidzivirira kunogumira pamaminetsi makumi mana nemashanu
Muchigadzirwa chidiki zvakadaro chisingakodzere ibhatiri hombe, zviri pachena. Sphero Mini ine kuzvimiririra inosvika pamaminetsi makumi mashanu nemashanu maererano nedhata repamutemo, kuti mukushandisa kwangu ndinogona kusimbisa kuti anozadziswa pasina matambudziko. Robhoti inokuyambira kuti iri kupera bhatiri nekuti iyo LED inovhenekera tsvuku, zvichiratidza kuti unofanirwa kuiisa pacharge. Munguva yekuchaja kweiyo iyo iyo LED iri bhuruu, uye kana ichinge yazara zvakakwana inenge iri green. Kuchaja nguva ingangoita awa rimwe chete.
Chinhu chandisingade nezve Sphero Mini ndechekuti bhatiri mune yekumira modhi rinogara zvishoma nezuva. Ukarega kuishandisa nechaji izere nhasi, mangwana haugone kuishandisa usina kuichaja zvakare. Izvi zvinoreva kuti, mukudzidzira chero nguva iwe yaunoda kuishandisa iwe uchafanirwa kuidzosera iyo kweawa kuti igone kushanda nemazvo. Sphero Mini inopinda munzira yekumira otomatiki kana iwe ukavhara iyo app pane yako nhare. Izvi zvinogona kugadziriswa nekudzima iyo Sphero, asi hapana bhatani rakadai pachigadzirwa, saka uchafanirwa kuisa sarudzo dzepamberi dzekushandisa kuti ukwanise kuzviita. Muchiitiko ichocho, bhatiri rinogara kwenguva refu kubhadhariswa kudzamara warishandisa zvakare, asi kuti urivhure iwe uchafanirwa kurivhara zvakare mucharger kuti urimise zvakare.
Sphero Mini chinhu chakanakidza chekutambisa chevana nevakuru chinopa mikana yakawanda yekutamba. Iyo kumhanya kwayo, kupindura kwayo nekukurumidza kune zvinodzora kubva kune iyo smartphone, iwo mavara eayo maLED uye izvo zvishongedzo zvinosanganisirwa mubhokisi Ivo vanoita chikuru chipo kune chero tech mudiwa. Mutengo pa Amazon zveinenge € 58 zvakaoma kuti usakurudzire kune avo vari kutsvaga kutanga munyika ino.
Ruvara-rwuchichinja mwenje mwenje
Saizi yakanaka yekuenda nayo chero kupi
Kusvika pamaminitsi makumi mashanu ekuzvimirira
Chimiro chekumira chinoshandisa bhatiri nezuva rimwe
Kupotsa bhatani bhatani
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Sphero Mini, iyo tekinoroji yakamanikidzwa kusvika pakakwirira
Inoenderera ichisimbiswa kuti kuchengetedza uye kutengeswa kweiyo iPhone X zvakanyorwa